Kusatendeseka Kunokukanganisa Sei?
“Zvinhu zvinombooma zvekuti panenge pachidiwa kachitsotsi kuti zvigadzirisike.”—Samantha, South Africa.
Unobvumirana nemashoko ari pamusoro apa here? Kungofanana naSamantha, tose zvedu tine patakamboomerwa nezvinhu. Zvatinosarudza patinosangana nemuedzo wekusatendeseka zvicharatidza kuti ndezvipi zvatinokoshesa. Semuenzaniso, kana tichinyanya kukoshesa kuti vamwe vanhu vanotiona sei, tingangoita zvinhu zvekusatendeseka tichiitira kuti tisanyadziswa. Zvisinei, kusatendeseka kunowanzokonzera matambudziko panozobuda chokwadi. Chimboona zvinotevera.
KUSATENDESEKA KUNOPARADZA USHAMWARI
Kuti vanhu vave neushamwari vanofanira kunge vachivimbana. Kana vaviri vachivimbana vanenge vasina chavanotyira hapana mumwe wavo anenge achityira kuti achazorasiswa. Asi zvinotora nguva kuti vanhu vasvike pakuvimbana. Vanhu vanopedzisira vava kuvimbana kana vakaita nguva vari vose, vachitaurirana chokwadi uye vachiita zvinhu zvakanakira mumwe nemumwe. Asi kuvimbana kunogona kuparara mumwe paanongoita chinhu chimwe chete chinoratidza kusatendeseka. Uye kana izvozvo zvikaitika, zvinogona kuoma chaizvo kuti vanhu vatange kuvimbana zvakare.
Wakamborasiswa here nemumwe munhu wawaifunga kuti ishamwari yako yepedyo? Kana zvakamboitika, wakanzwa sei? Unofanira kunge wakarwadziwa, kunyange kunzwa sekuti wabatiswa dombo. Izvozvo ndizvo zvinowanzoitika. Zviri pachena kuti kusatendeseka kunoparadza ushamwari.
Ongororo yakaitwa naRobert Innes, mumwe muzvinafundo wepaUniversity of California, yakaratidza kuti “kusatendeseka kunotapukira.” Saka, kusatendeseka kwakafanana neutachiona, kana ukatamba nemunhu asina kutendeseka, unogona kuguma wavawo munhu asina kutendeseka.
Ungaita sei kuti usasvika pakuva munhu asina kutendeseka? Bhaibheri rinogona kukubatsira. Tapota ona mavhesi mashomanana emuBhaibheri.
Zviito Zvinoratidza Kusatendeseka
KUITA SEI? Kuudza mumwe munhu nhema asi iye achifanira kuziva chokwadi. Kunyepa kuwedzeredza kana kusiyirira mamwe mashoko nechinangwa chekunyengedza munhu kana kuita kuti asaziva chokwadi.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Nokuti munhu anonyengedzera anosemesa Jehovha, asi Iye anoshamwaridzana nevakarurama.” (Zvirevo 3:32) “Saka zvino, zvamakabvisa nhema, mumwe nomumwe wenyu ngaataure chokwadi nomuvakidzani wake.”—VaEfeso 4:25.
KUITA SEI? Kutaura zvinhu zvakaipa chaizvo uye zvenhema kuti mumwe munhu asaonekwe semunhu akanaka.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu anonyengera anoramba achibudisa kukakavara, uye munhu anochera vamwe anoparadzanisa vaya vanoshamwaridzana.” (Zvirevo 16:28) “Kana pasina huni, moto unodzima, uye kana pasina munhu anochera vamwe, kukakavara kunopera.”—Zvirevo 26:20.
KUITA SEI? Kuita kuti munhu akupe mari yake kana kuti zvinhu zvake asingazive kuti uri kumutsotsa.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Usabiridzira munhu wemaricho ari kutambudzika uye murombo.” (Dheuteronomio 24:14, 15) “Anobiridzira munhu akaderera anozvidza Muiti wake, asi munhu anonzwira murombo nyasha anomukudza Iye.”—Zvirevo 14:31.
KUITA SEI? Kutora chinhu chemumwe munhu pasina mvumo.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Anoba ngaachirega kubazve, asi ngaashande nesimba, achiita basa rakanaka nemaoko ake, kuti ave nechimwe chinhu chokupa mumwe munhu anoshayiwa.” (VaEfeso 4:28) “Musatsauswa. . . . Mbavha, kana vanhu vanokara, kana zvidhakwa, kana vanotuka, kana makororo havazogari nhaka youmambo hwaMwari.”—1 VaKorinde 6:9, 10.